एकपटक मेरो प्लानेटको फनपार्क जाने की ? – sunpani.com
एकपटक मेरो प्लानेटको फनपार्क जाने की ?
सुनपानी । ३ कार्तिक २०७७, सोमबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – दशैं । घरपरिवार, इष्टमित्रका बीचमा रमाइलो गर्ने पर्व । पारिवारिक जमघट र रमाइलोे, घरमा मात्रै नभई वरिपरिका शान्त र रमणीय स्थलहरुमा पनि पुगेर गरिन्छ ।
हो, यही बेलामा नेपालगञ्जको बालेगाउँमा मेरो प्लानेटले बोन एपेती रेष्टुरेन्ट एवं बार सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
शान्त र रमणीय फनपार्कभित्र रहेको यो रेष्टुरेन्टमा विभिन्न परिकारहरु उपलब्ध छन् । नेपालगञ्जका मेयर डा.धवलशमशेर राणाले रेष्टुरेन्टको केक काटेर शुभारम्भ गर्नुभयो ।
मेरो प्लानेटका प्रवन्ध निर्देशक ओमप्रकाश मिश्राका अनुसार, रेष्टुरेन्टमा नेपाली, भारतीय, तन्दुरी, चाइनिज परिवकारका साथै वारको व्यवस्था रहेको छ । बोन एपेतीले अन्य रेष्टुरेन्टले लिदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क नलिने तथा शुरुवातमा १० प्रतिशत थप छुट दिने जनाएको छ ।
रेष्टुरेन्टमा जादा त्यहाँ रहेको फनपार्कले लोभ्याउने छ । त्यहाँ सानो र ठूलो गोष्ठी, सेमिनार, बैठक तथा जन्मोत्सव, वर्षागाँठ एवं शुभ विवाह जस्ता कार्य गर्नका लागि हल रहेको छ । मेरो प्लानेटले त्रिभुवनचोकमा चट्कारे पनि सञ्चालन गरेको छ ।
नेपालगञ्ज–१४, बालेगाउँस्थित लगभग ३.५ विगाह क्षेत्रमा फैलिएको रिसोर्टमा विभिन्न चार वटा सेवाहरु रहेका छन् । दशैंको बेलामा एकपटक परिवारसहित घुम्न जानै पर्ने ठाउँको रुपमा फनपार्कलाई लिइएको पुग्नेहरु बताउँछन् ।